Sidee si ay u noqdaan sameeysa a blockchain - Blockchain News
Sidee si ay u noqdaan sameeysa a blockchain
Haddii aad riyoodaan oo ah abuurista aad cryptocurrency u gaar ah, barashada sida loo qoro heshiisyada smart iyo codsiyada blockchain, laakiin ma fahmi barnaamijyadooda, ama haddii lagu soo koraya muddo dheer, laakiin kaliya ka bartay oo ku saabsan cryptocurrencies oo doonaya in ay mar kale waxbarasho, waxaa suurto gal ah. In this article, waxaan kuu sheegi doonaa sida loo madax banaan baran su'aasha, waxa aqoonta noqon doono mid waxtar leh iyo meesha aad ka heli.
Waa maxay nooca saldhig waxaa loo baahan yahay horumarinta blockchain?
Haddii aynu ka hadlayno horumarinta heshiisyada smart on qaar ka mid ah dhufto ee ka, tusaale ahaan, Ethereum, markaas “saldhig” looma baahna. Waxaad u baahan tahay oo kaliya awood u leh in ay isticmaalaan matoorada search iyo in yar oo samir a. isu, heshiisyada smart ayaa uuraysatay si hufan si ay u abuuraan karin dadka aan si gaar ah u yaqaanaan sireed. ku adag tahay kaliya in bixi kara waa la'aanta ah ee qalabka tababarka, maxaa yeelay, technology tani waa mid aad u yar yar.
Haddii aynu ka hadlayno horumarinta our blockchain u gaar ah, ka dibna waxaa loo baahan yahay saldhigga halis ah. Laakiin kaliya ma noqon doonto in ku filan.
Waa maxay aqoonta mudan gadashada
Waxa ugu muhiimsan waa in ay fahmaan sida shuqullada technology. Inta badan xadeynta ee horumarinta blockchain la xiriira ku dhegyadii of technology, taas ma ogola isticmaalka naqshadaha qiyaas qaar ka mid ah. Iyada oo ay taasi, dhibaatooyinka ugu horeysay in ka kac inta lagu jiro marxaladda bilowga ah waa la xiriira. Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii aad leedahay faham of technology laftiisa, dhibaatooyinka si ay u yaqaaniin mid ka mid ah luqadaha barnaamijyada qoro heshiisyada smart mar dambe ma kici doona. Intaa waxaa dheer, Waxaan kula talin lahaa taxaddar leh u akhriyo ku Warqad cad of cryptocurrency ah, ku salaysan kuwaas oo aad u socotaan si ay u qoraan heshiis smart.
Ma suurto gal ah in ay bartaan si madaxbanaan ama ka wanaagsan in ay qaataan koorsooyin gaar ah?
Dabcan, aqoon kasta oo hadda si madax-bannaan iibsan karaa, ugu yaraan, maxaa yeelay, inta badan mashaariicda waxaa lagu bixiyey in GitHub. Dhibaatada ugu weynna waa xawaaraha aqoonta helitaanka. Dhinaca mid, waxaa jira macluumaad badan oo ku saabsan blockchain ah, laakiin waxaa aad u gacmeed, si wakhtiga intiisa badan u tegi doonaa dabaqii xogta. Dhanka kale, waxaa jira khatar ah in aad kaliya ku celinayaa dhammaan falalka macallinka, nuqul ka code oo dhan ka kitaabka, laakiin aad wax ma barto. Sidaa darteed, Waxaan ku talinaynaa lahaa qaadashada koorsooyin halkaas oo aad si dhakhso ah u heli kartid aqoon aasaasi ah oo ay barbar galaan is-waxbarasho, tusaale ahaan, dhigay gool – si ay u hirgeliyaan Mashruuca gaar ah.
Waa maxay luqadaha barnaamijyada loo baahan yahay?
Waxaan aaminsan nahay in waxa ay taasi jirin dareen in ay kala luqadaha barnaamijyada by heerka uu gaarsiisan waxtarka wax cusub barashada. luqadda barnaamijyada A waa kaliya qalab in ku haboon yahay mararka qaarkood.
In shirkadaha waaweyn ka Valley Silicon ee guud jiro ma jiraan wax sida horumariyaha ah ee ka mid ah ama mid kale luqada. Sidaas darteed haddii aad barnaamijka karaa waa lagu daray weyn. Haddii aad qabto fahamka sida saxda ah u samayn, og mabaadii'da aasaasiga ah ee dhismaha naqshadaha naqshadaha iyo qiyaas waa lagu daray, xataa weyn.
ilaha waxtar u leh takhasus bilaabayso
Waxaan ku talinaynaa ah buugga sameeysa Andreas M. Antonopoulos. Sidoo kale, aad u baahan tahay in la akhriyo White Paper ee cryptocurrency ah, ku salaysan kuwaas oo aad u socotaan si ay u horumariyaan. Ka dib markii aad fahmi technology laftiisa, tago in reading dukumiintiyada. waxaana nahay kuwo aan isla markiiba ku talinaynaa bilaabo fulinta kun oo ka mid ah Casharrada, maxaa yeelay, sabab u tahay xaqiiqda ah in technology waa yar yahay ku filan, kaliya warqadaha rasmiga ah uma shaqayn karo sidii isha kaliya lagu kalsoonaan karo.
Laakiin ka dib markii barashada dukumiintiyada, waxaad tagi kartaa on si ay u qabtaan Casharrada fudud. Sida tusaale code, waxaa jira xad ah dhawr mashruuc oo il furan yihiin in si sahlan si aad u hesho on GitHub.
Sidoo kale hadda waxaa jira bulshada loogu talagalay horumarinta, telegraam chat, koorsooyin online, kooxaha ee LinkedIn iyo wixii la mid ah, sidaa darteed waxaa waa in aanay noqon dhibaato raadinta bulshada.
Sidee si ay u noqdaan sameeysa a blockchain?
★★★ 7 Koorsooyinka TOP Blockchain Development, Training and Certifications ★★★
Metatron soo bandhigtay Cr ...
co-aasaasaha Uber & amp ...